नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै वडामा बजेट नजाने अवस्था आएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाले कांग्रेसले नजितेको ठाउँमा बजेट नपठाउने भनी गरेको भाषणको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले देउवाकै वडामा बजेट नजाने अवस्था आएको बताए ।
'कतिपय ठाउँमा रुखमा भोट नहाल्नेलाई बजेट पठाइँदैन .... (भनेको सुनियो) । संयोगकै कुरा हो, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज जाने भएछ । कुन पालिकामा कांग्रेसले जित्या छ, त्यसमा जाने होला,' ओलीले भने, 'अमरगढी जित्या छ कि छैन ? अमरगढी कांग्रेसले जित्या भए त ठीकै छ, नत्र कुन-कुनामा लगेर राख्नुपर्ने हो मेडिकल कलेज ।'
ओलीले थपे, 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नै वडामा चाहिँ के पनि जाने भएन, किनभने त्यहाँ रुखले जितेन कि क्या हो ? लोकतन्त्रको हरिबिजोग यो भन्दा अरू के हुन्छ ?'
ओलीले अमरगढी जित्या छ कि छैन ? भनेर प्रश्न गर्दा देउवाले संसद्बाटै जितेको छ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।